“လတ်တလောရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လူသတ်မှု၊ မီးရှို့မှု နှင့်အဓိကရုန်းဖန်တီးမှု၏တရားခံဘယ်သူလဲ သုံးသပ်ချက်စာတမ်း” . . . | Danya Wadi
»မှတ်စု»“လတ်တလောရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လူသတ်မှု၊ မီးရှို့မှု နှင့်အဓိကရုန်းဖန်တီးမှု၏တရားခံဘယ်သူလဲ သုံးသပ်ချက်စာတမ်း” . . .
“လတ်တလောရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လူသတ်မှု၊ မီးရှို့မှု နှင့်အဓိကရုန်းဖန်တီးမှု၏တရားခံဘယ်သူလဲ သုံးသပ်ချက်စာတမ်း” . . .
Posted by danyawadi on July 4, 2012 in မှတ်စု, သတင်းများ, သူ့အကြောင်း, ဆောင်းပါးများ
← ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက် တချို့က ပဋိပက္ခဖန်တီးရန် ကြိုးစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပွား
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ (Ornagai), မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် (စိုင်း မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်), →
14 comments on ““လတ်တလောရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လူသတ်မှု၊ မီးရှို့မှု နှင့်အဓိကရုန်းဖန်တီးမှု၏တရားခံဘယ်သူလဲ သုံးသပ်ချက်စာတမ်း” . . .”
Robert July 14, 2012 at 11:05 pm	Reply
who wrote this article? it is very nice and sound data. Dear Editor, Please describe the author.
zawhtun November 14, 2012 at 8:15 pm	Reply
သမိုင်းကြောင်းကိုလှန်ကြည့်လိုက်ရင် ကို့မအေကိုလိုးတာ, ကိုယ့်သမီးကိုလိုးတာ,ကိုယ်သမီးလောက်တောင်မရှိတဲ့ အရွယ်မရောက်သေးသောမိန်းခလေးတွေကို လိုးတာ အစ္စလာမ်ခေါင်းဆောင် မိုဟာမက် ရဲ့ လက်စွဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေပါ။ မင်းတို့မွတ်ဆလင်ကုလားတွေသာ ကိုယ်ဖင်ကိုလိုးပြီး လောက်တက် ခွေးစား သေလိုက်ကြတော့။
ရခိုင်၊ရိုဟင်ဂျာအရေးခင်းတွင် လူမဆန်သည့် ဖြစ်ရပ်များ …. « danyawadi July 29, 2012 at 9:31 am	Reply
အာကာ July 29, 2012 at 4:17 pm	Reply
kyaw linn August 22, 2012 at 3:16 pm	Reply
ko may ko lo goddama ma ya par tha, ko may ko lo goddama, ko may ko lo buddah
ရခိုင်၊ရိုဟင်ဂျာအရေးခင်းတွင် လူမဆန်သည့် ဖြစ်ရပ်များ …. « musliminfoburma August 1, 2012 at 7:09 am	Reply
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်သီးခြား လွတ်လပ်သော”စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်” ကို နိုင� August 17, 2012 at 10:25 am	Reply
အစွန်းရောက် လူမျိုးရေးခေါင်းဆောင်၊ အဓိကရုဏ်းဖန်တီးသူ တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန် အေးမောင်နဲ့ အင်တာဗျ� September 19, 2012 at 10:10 am	Reply
[…] အစွန်းရောက်လူမျိုးရေးခေါင်းဆောင်၊ ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား၊ အဓိကရုဏ်းဖန်တီးသူ တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန် အေးမောင်နဲ့ အင်တာဗျူးလေး ပြန်လည် ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အေးမောင်နဲ့ ၎င်းရဲ့ပါတီဟာ ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာအဓိကရုဏ်းကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့နေရာမှာ အဓိကလှုပ်ဆော်သူများအဖြစ်နဲ့ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တရားဝင်နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပါတီမှ စာတမ်းတစ်စောင် ပြုစုရေးသား၍ သမ္မတ (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း) သိန်းစိန်ထံ တရားဝင်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ယနေ့အထိ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီစာတမ်းကို ဖတ်ချင်သူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။ […]
အစွန်းရောက် လူမျိုးရေးခေါင်းဆောင်၊ ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာအဓိကရုဏ်း ဖန်တီးသူ တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန် အေး September 19, 2012 at 10:17 am	Reply
“လတ်တလောရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လူသတ်မှု၊ မီးရှို့မှု နှင့်အဓိကရုန်းဖန်တီးမှု၏တရားခံ ဘယ်သူလဲ� September 29, 2012 at 3:38 pm	Reply
[…] “လတ်တလောရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လူသတ်မှ…. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. This entry was posted on September 30, 2012, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink. Leaveacomment […]
Tuntha October 27, 2012 at 8:19 am	Reply
မြန်မာစကားပုံ(မြွေပွေး)ကိုနောက်မှသတ်ရခိုင်ကိုအလျင်သတ် ဆိုရိုးအတိုင်း မဟုတ်မမှန်သတင်းရေးသားပြီးသံသယဖြစ်စေသောရခိုင်ဘီလူးလူယုတ်မာများ၏ကောလဟာလသတင်းများကိုသတိထားရန်လိုအပ်သည်။ ဘင်္ဂလားနယ်ဖွား
ရခိုင်ဆိုသောစကားလုံးမှာ ပါဠိကုလားစာပေဝေါဟာရ(Rakshak) မှဆင်းသက်လာပြီး လူအသားစားသောဘီလူးဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဘီလူးသည် ဗမာနှင့်ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဘီလူးကလူ၏အသားကိုစားပြီး ဗမာကလူသားချင်းနားလည်းမှုရှြိောက်င်းပါ။
ကိုကျော်မြ December 25, 2012 at 12:44 am	Reply
(rakshak ) ဆိုတာကလားလို ဘီလူးဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်နော် ရခိုင်လိုတော့(ရက္ခိတ) ဆိုတာပါဠိဘာသာစကားအရ အစောင့်အရှေက်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ခင်ဗျားကတော့ BUDDHA
ဘာသာဝင်လားမသိဘူး ။ကောမန်းတွေအမျိုးမျိုးပေးနေတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အာရက္ခ ဆိုတာ ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ မင်္ဂလသုတ်ပရိတ်တော်မှာပတယ် လေ့လာကြည့်နှော် ဗဟုသုတဖြစ်တာပေါ့။ တကယ်ဘီလူးကျတော့ ယက်ခလို့ခေါ်တယ်နော် rak နဲ့မရေးဘူးနော်
yak နဲ့ရေးတယ်နော် ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့( RA )ရ (YA)ယ ဆိုတာလေးကိုပီပီသသရအောင်ဖတ်
ပါအုံး။ သင်တို့ရဲ့ဆဲဆိုမှုတွေက သင်တို့ရဲစာရိတ္တကိုပြသပေးနေတယ်…သင့်တို့ရဲ့သုံးသတ်ချက်ကလည်း တာဆီးသလိုလိုနဲ့ မြှောက်ပေးနေတယ်။ မနာလိုမှုတွေကြောင့်ပေါက်ကရလေးဆယ်တွေ
လျှောက်မရေးကြပါနဲ့။ လူမျိုးရေးပြဿနာများကို ဆွပေးသလိုဖြစ်နေတယ် ။ ခင်ဗျားလည်းအပေါင်းပါတစ်ယေက်လားတော့မသိဘူး။ နိုင်ငံတော်တိုးတက်အောင်မကြိုးစာဘဲ